NUG supports sanctions against family members of coup leaders, human rights minister says (စစ်အုပ်စု၏ ပြည်ပရောက် မိသားစုတို့ကို အရေးယူပိတ်ဆို့ရန် NUG စီစဉ်) – SaveMyanmar.today
Myanmar nationals continue ‘social punishment’ campaigns and lobby lawmakers abroad to blacklist the adult children of junta members
The National Unity Government (NUG) is planning to work with foreign countries to introduce and expand sanctions against the overseas relatives of Myanmar’s coup council members, according to the NUG’s human rights minister.
The NUG is the interim government formed in late April by lawmakers ousted in Myanmar’s February 1 coup.
“We will coordinate with foreign affairs and immigration departments to sanction the [adult] children of those who are blacklisted,” NUG’s Minister of Human Rights Aung Myo Min said.
Aung Myo Min wasaprominent rights activist before takingaCabinet position within the NUG.
Following widespread killings of protesters by the regime’s armed forces, the US and European Union (EU) are among the international actors who imposed sanctions on members of the military junta and those related to them.
Since the coup, the US has announced sanctions against key junta leaders, the members of two Light Infantry Divisions, and two adult children of military chief Min Aung Hlaing. They are banned from the country, their American assets have been frozen and American citizens are prohibited from working with them.
The EU has imposed similar sanctions against 35 people in Myanmar, including members of the military, its council, and collaborating civilian politicians.
The Myanmar public both at home and abroad have been carrying out “social punishment” campaigns, identifying and exposing the family members of junta members and supporters online. The campaigns call for these individuals to be ostracised from the Myanmar community.
Myanmar nationals held protests in front of Japan’s Toyo University in March calling for the “social punishment” of Nan Lin Lae Oo,astudent at Toyo and the daughter of Lt-Gen Kyaw Swar Lin, head of the Myanmar military’s Central Command.
Kyaw Swar Lin is accused of ordering soldiers to open fire on anti-regime protesters in Mandalay. The resulting crackdowns killed several civilians in February and March.
Nan Lin Lae Oo reportedly left Japan following the protests outside her university.
“We were told that Kyaw Swar Lin’s daughter has returned to Myanmar. We do not know exactly how, but she is no longer at the school,” Myat Thu Aung, who is working in Japan, told.
He said that other Myanmar nationals in the country are lobbying Japanese lawmakers to back sanctions against family members of those behind the coup.
“Our message has arrived inside the Japanese parliament. There are some discussions going on among parliament members who are deciding what to do about those individuals,” Myat Thu Aung said.
The Sydney Morning Herald reported in early May that the Australian government’s department of home affairs had launched investigations into 22 relatives of Myanmar’s military council living in Australia, “amid concerns they are either harbouring assets or receiving financial support in the wake of the military coup.”
In the US, Myanmar activists are coordinating with state governments and representatives to gather information about the family members of the coup council members and their American finances.
“There are many steps left regarding action that can be taken by the US government. We are currently working with lawyers and lawmakers,” US-based Myanmar national Nay Tin Myint told.
The NUG’s human rights minister Aung Myo Min said that his cabinet is also documenting the violence perpetrated by the junta with the aim of filing complaints against military members at the International Criminal Court.
“The consequences would have an impact on many future generations,” he said of an international prosecution.
The military’s armed forces have killed at least 781 people since it seized power from the elected civilian government inacoup on February 1, according toatally compiled by the Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).
စစ်အုပ်စု၏ ပြည်ပရောက် မိသားစုတို့ကို အရေးယူပိတ်ဆို့ရန် NUG စီစဉ်
ပြည်သူကိုအကြမ်းဖက်မှု၏ အကျိုးဆက်များမှာ ကျူးလွန်သူတို့၏ မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာ ထိခိုက်နိုင်သည်ကို စစ်အုပ်စုဝင်တို့ သတိပြုကြရန် NUG လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးက သတင်းစကားပါးသည်
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တို့၏ ပြည်ပရောက်မိသားစုဝင်များကို အရေးယူပိတ်ဆို့နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေသည်ဟု အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ (NUG) က ပြောသည်။
နိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့များမှတဆင့် ကြိုးပမ်းမည်ဟု NUG လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်မျိုးမင်းက ပြောသည်။
“အမည်မဲ စာရင်းသွင်းခံထားရတဲ့ သားသမီးတွေကို သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ ရှိပါတယ်”ဟု ဦးအောင်မျိုးမင်းက ပြောသည်။
ဆန္ဒပြပြည်သူများကို စစ်ကောင်စီ၏ လက်နက်ကိုင်များက ရက်ရက်စက်စက် ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းခဲ့ပြီးနောက် စစ်ကောင်စီနှင့် ဆက်နွယ်နေသည့် အသိုင်းအဝိုင်းကို နိုင်ငံတကာကလည်း ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ အရေးယူလျက်ရှိသည်။
ထို့ပြင် ပြည်တွင်း၊ပြည်ပရှိ မြန်မာပြည်သူများကလည်း အဆိုပါအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ် Social Punishment ခေါ် လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ခတ်သည့် လှုပ်ရှားမှုကို စစ်အာဏာသိမ်းသည့် ဖေဖော်ဝါရီလမှ စတင်ကာ အရှိန်အဟုန်နှင့် ဆောင်ရွက်နေကြသည်။
စစ်ခေါင်းဆောင်များနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသူများကို လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှ ဖယ်ကျဉ်သည့် လှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည်။
စစ်ထောက်ချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျော်စွာလင်း၏ သမီးဖြစ်သူ နန်းလင်းလဲ့ဦး သွားရောက်ပညာသင်ကြားနေသည့် ဂျပန်နိုင်ငံ တိုရိုတက္ကသိုလ်ရှေ့တွင်လည်း ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာပြည်သူများက မတ်လဆန်းပိုင်းက လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ခတ်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။
ပြီးခဲ့သည့် မတ်လက ဒါဇင်နှင့်ချီသည့် လူငယ်များသေဆုံးခဲ့သည့် မန္တလေးမြို့ပစ်ခတ်မှုတွင် နန်းလင်းလဲ့ဦး၏ ဖခင်ဖြစ်သူ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျော်စွာလင်းက ပစ်မိန့်ပေးခဲ့၍ လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ပေးရန် ထိုက်တန်သည်ဟု အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်သူများက ယူဆကြသည်။
နန်းလင်းလဲ့ဦးကို လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ခတ်ပြီးနောက်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသည့် စစ်အုပ်စုဝင်များ၏ မိသားစုများမှာ ခြေရာဖျောက်ရန် ကြိုးစားသွားကြပြီး ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုခြင်းကိုလည်း ရပ်တန့်ခဲ့သည်ဟု ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေသည့် ကိုမြတ်သူအောင်က ပြောသည်။
“ခု နောက်ဆုံး အခြေအနေအရဆိုရင်တော့ သူ့သမီးက ပြန်သွားရတယ်လို့တော့ ပြောတယ်။ ဘယ်လေကြောင်းလိုင်းနဲ့ ပြန်သွားရတယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အတိအကျမသိရပါဘူး။ ကျောင်းမှာတော့ မရှိတော့ဘူး” ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေသည့် စစ်အုပ်စုအနွယ်များကို ဆက်လက်အရေးယူနိုင်ရန်အတွက်လည်း ဂျပန်အစိုးရအဖွဲ့ကို ဂျပန်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှတဆင့် တောင်းဆိုနိုင်ရန် ဆွေးနွေးနေသည်ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
“အဲ့ဒီသတင်းစကားက ဂျပန်လွှတ်တော်အထိ ရောက်ပါတယ်။ ဂျပန်လွှတ်တော်ကနေတဆင့် သူတို့ကိုယ်တိုင်က ဆွေးနွေးနေကြတာရှိပါတယ်။ ဒါတွေ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့် တပ်မတော်ထိပ်တန်းအရာရှိ ၁၀ ဦးအပြင် စစ်ကောင်စီက ခန့်အပ်သည့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကို မတ်လ ၂၂ တွင် ဥရောပသမဂ္ဂက ပိတ်ဆို့အရေးယူခဲ့သည်။
ထို့နောက် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတွင် ပါဝင်သည့် အရပ်သားနိုင်ငံရေးသမားများအပါအဝင် မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက် (MEHL) နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း (MEC) တို့ကို ဧပြီလတွင် ဥရောပသမဂ္ဂက ထပ်မံ အရေးယူပိတ်ဆို့လိုက်သည်။
စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပတ်သက်သည့် မိသားစု ဆွေမျိုး ၂၂ ဦးမှာ ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေထိုင်နေပြီး ဩစတြေးလျပြည်ထဲရေးဌာနက စုံစမ်းနေသည်ဟု Sydney Morning Herald သတင်းစာက မေ ၅ တွင် ရေးသားထားသည်။
စစ်ကောင်စီဝင်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လက်ခံပေးထားခြင်း၊ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ရယူထားခြင်းတို့ကို စုံစမ်းနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ သတင်း၌ ဖော်ပြသည်။
အမေရိကန်ကလည်း နိုင်ငံအတွင်းရောက်ရှိနေသည့် စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တို့၏ မိသားစုဝင်များ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ စသည့် အချက်အလက်များကို စုဆောင်းနေပြီး အစိုးရ၊ လွှတ်တော်အမတ်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည်ဟု အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်သည့် ဦးနေတင်မြင့်က ပြောသည်။
“အစိုးရက တိုက်ရိုက်အရေးယူပေးဖို့ဆိုတာ အဆင့်တွေအများကြီး ရှိနေပါသေးတယ်။ ရှေ့နေတွေနဲ့ရော သက်ဆိုင်တဲ့ အစိုးရ လွှတ်တော်တွေနဲ့ရော လုပ်ဆောင်နေဆဲပါ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ၏ ရက်ရက်စက်စက် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်နေမှုများမှာ နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုမြောက်နေပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခုံရုံး (ICC) တွင် အရေးယူနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းသွားမည်ဟု NUG၏ လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်မျိုးမင်းက ပြောသည်။
“ဒါကြောင့်မို့ ဒါမျိုးလုပ်ဆောင်နေတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ အသိတရားရှိဖို့၊ လူလိုသိဖို့၊ ပြီးလို့ရှိရင် နောက်ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်တွေက ကိုယ့်ရဲ့ မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာအထိ ဆက်လက်ပြီးတော့ ထိခိုက်နိုင်တယ်။ ဒါကို သတိပြုကြပါ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့၏ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့် ဖမ်းဆီး၊ နှိပ်စက်၊ သတ်ဖြတ်ခံရသူများကို မြို့အသီးသီးတွင် တွေ့နိုင်ပြီး စစ်ကောင်စီက ထိုလုပ်ရပ်များအတွက် ပြည်သူလူထုကို တောင်းပန်ခြင်း မရှိပေ။
စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကာလအတွင်း ရဲနှင့် စစ်သားတို့၏ လက်ချက်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၇၈၁ ဦးအထိ ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ်ကျဆုံးသည့် အရေအတွက်မှာ ထို့ထက်ပိုမိုများပြားနိုင်သည်ဟု နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) က မေ ၁၀ တွင် ထုတ်ပြန်သည်။
စစ်ကောင်စီက ပြည်သူ ၃၈၄၃ ဦးကို ဖမ်းဆီးထားပြီး ၈၆ ဦးကို ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်ဟု AAPP ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
AAPP ၏ စာရင်း မှားယွင်းနေကြောင်း၊ စာရင်းထဲရှိ ၇ ဦးမှာ ၎င်းတို့လက်ချက်ကြောင့် သေဆုံးခြင်းမဟုတ်ကြောင်း စစ်ကောင်စီက ၎င်းတို့၏ သတင်းစာများတွင် ဧပြီ ၃၀နှင့် မေ ၂ ရက်နေ့များက ငြင်းဆိုသည်။
ဧပြီလဆန်းပိုင်း CNN သတင်းဌာနနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင်မူ စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရအရာရှိက သေဆုံးမှုအရေအတွက်မှာ ရဲ ၁၀ ဦး၊ စစ်သား ၆ ဦးအပါအဝင် စုစုပေါင်း ၂၄၈ ဦးသာ ရှိသည်ဟု ပြောခဲ့သည်။
Tagged coup leaders, MEC, Min Aung Hlaing, NUG, protest against military coup, sanctions, savemyanmar, savemyanmartoday, Social Punishment, whatshappeninginmyanmar
CRPH announce lineup of interim “National Unity Government” (အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခြင်း)